के तपाईंलाई विश्वास लाग्छ, तपाईंको खल्तीमा सुनखानी छ ?
गृहपृष्ठ » अनौठो संसार » के तपाईंलाई विश्वास लाग्छ, तपाईंको खल्तीमा सुनखानी छ ?
शुक्रबार २८ मङ्सिर, २०७५
काठमाडौं । तपाईंलाई यदि हामीले तपाईंको खल्ती सुनको खानी हो भन्यौं भने पत्याउनुहुन्छ ? हुँदैन नि ? तर यो शत प्रतिशत साँचो हो । सुनको यो खानी हो तपाईंको मोबाइल । मोबाइल मात्र होइन, ती सबै इलेक्ट्रोनिक सामानमा यति सुन हुन्छ कि जुन खानीमा निकै मुश्किलका साथ भेटिन्छ ।
कुनै खानीबाट तीनदेखि चार ग्राम सुन निकाल्नका लागि करिब एक टन विशेष धातु भएका खनिज छान्नु पर्छ । यस्तै, मोबाइल फोन, ट्याबलेट र ल्यापटपजस्ता एक टन इलेक्ट्रोनिक फोहोरबाट करिब तीन सय ५० ग्राम सुन निकाल्न सकिन्छ । मानव बस्तीमा भएका यी अन्जान सुन–चाँदीका खानीको दोहन टोकियोमा सन् २०२० मा हुने ओलम्पिक खेलका लागि हुने भएको छ ।
टोकियो सन् २०२० ओलम्पिकका आयोजकले खेलका मेडल अर्थात तक्मा ‘अर्बन माइनिङ’ मार्फत पाइएको धातुबाट तयार गरिने घोषणा गरेको छ । उक्त ओलम्पिकमा करिब पाँच हजार मेडल दिइनेछ । यसका लागि आयोजक समिती इलेक्ट्रोनिक फोहोरबाट मूल्यवान धातु निकालेर सुन, चाँदी र पित्तलका पदक तयार गर्नमा जुटेको छ । अर्थात्, संसारको सबैभन्दा प्रतिष्ठित खेलको मेडल फोहोरबाट तयार हुनेछ ।
फोहोरमा मूल्यवान् धातुः प्रयोगपछि फ्याँकिने इलेक्ट्रोनिक सामानको फोहोर यतिबेला संसारमा तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । यो निकै खतरनाक र विषालु फोहोर हो । तर, यी विद्युतीय फोहोरमा मूल्यवान धातुको खानी पनि हुन्छ । यही खानीबाट टोकियो सन् २०२० ओलम्पिकको मेडल बनाइनेछ । आयोजक समितीले जापानी जनतासँग काम नलाग्ने विद्युतीय सामान दान गरेर सहयोग गर्न अपिल गरेको छ ।
संसारमा बढिरहेको विद्युतीय फोहोरलाई नियन्त्रण गर्न यो रोचक अभियानले निकै सहयोग गर्ने बताइएको छ । यतिबेला संसारका हरेक देशलाई विद्युतीय उपकरणको यस्तो लत लागेको छ कि हाम्रो धर्ती फोहोरले दिनप्रतिदिन ढाकिँदै छ । संयुक्त राष्ट्रको आँकडा अनुसार सन् २०१६ सम्म संसारमा करिब साढे चार करोड टन विद्युतीय फोहोर पैदा भएको थियो । यो फोहोर हरेक वर्ष तीन–चार प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रको एक रिपोर्ट अनुसार २० प्रतिशत काम नलाग्ने विद्युतीय उपकरण मात्र रिसाइकल गरिन्छ, अन्यलाई मानिसहरुले घरमै राखेर बिर्सन्छन् अथवा, यत्तिकै फ्याँकिदिन्छन् । यो मूर्खतामात्र होइन, निकै खतरनाक बानी हो । किनभने विद्युतीय फोहोरले हाम्रो माटो र पानीलाई विषालु बनाइदिन्छ ।
तर यी फोहोरलाई अब मूल्यवान् धातुको खानीको रुपमा पनि हेरिएको छ, र जापानले यसलाई उदाहरणको रुपमा पेश गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रमा विद्युतीय फोहोरका विशेषज्ञ रियूडिगर क्यूहर भन्छन्, ‘जापानसँग प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्यधिक कमी छ । यस्तोमा उनीहरुसँग विद्युतीय फोहोरबाट मूल्यवान् धातु निकाल्ने एक सुनौलो मौका छ ।’
ब्रिटिश कोलम्बिया युनिभर्सिटीकी मारिया होलुस्को भन्छिन्, ‘विद्युतीय फोहोरबाट धातु निकाल्नु थुप्रै पटक साँच्चैको खानीबाट सुन निकाल्नुभन्दा सय गुणा बढी फाइदाजनक हुन्छ । मारिया यसलाई ‘अर्बन–माइनिङ’ नाम दिन्छिन् । विद्युतीय फोहोरबाट सुन चाँदी र पेलेडियमजस्ता धातु निकाल्दा हामीले मूल्यवान् धातु त पाउँछौं नै यसले खानीको दोहोन पनि कम गराउँछ । मारियाका अनुसार यो व्यापारको निकै शानदार मौका हो, यसलाई गुमाउनु हुँदैन ।
सन् २०१८ सम्म जापानका इलेक्ट्रोनिकको पसलले ४३.२ लाख बेकार मोबाइल फोन जम्मा गरेका थिए । यस्तै नगर निकाय संस्थाले ३४ हजार टन साना विद्युतीय उपकरण पाइसकेको थियो । एक जापानी वृद्ध महिलालाई एक प्रचार भिडियोमा देखाइएको छ जसमा उनी भनिरहेकी छिन्, ‘आफूले प्रयोग नगर्ने मैले पाँचवटा मोबाइल फोन दान गरेकी छु । यसरी ओलम्पिक खेलमा सहभागी हुन पाउँदा म निकै खुसी छु ।’
३५–४० वटा मोबाइल फोनबाट तपाईं एक ग्राम सुन निकाल्न सक्नुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिका अनुसार ओलम्पिक खेलको सुनको मेडलमा कम्तिमा पनि ६ ग्राम सुन हुनुपर्छ । सुनको यस्तो खोजीबारे संसारभरी निकै चर्चा भइरहेको छ । यसका लागि थुप्रै मेडल बिजेताले पनि आफ्नो पुराना विद्युतीय उपकरण दान दिएका छन् ।
विद्युतीय फोहोर यति धेरै छन् कि त्यसको रिसाइकलका लागि अपार सम्भावना छन् । जापानमा अहिलेसम्म जम्मा गरिएका फोहोर देशको कूल विद्युतीय उपकरणको तीन प्रतिशत मात्रै हो । जापानमा करिब २० लाख टन विद्युतीय फोहोर भएको हुनसक्ने संयुक्त राष्ट्रले अनुमान लगाएको छ ।
विद्युतीय फोहोरबाट सुन चाँदी निकादेपछि बाँकी भाग के गर्ने, त्यसबारे अहिले योजना बनाइएको छैन । जापानमा जुन विद्युतीय फोहोर जम्मा गरिएका छन्, ओलम्पिक समितिले त्यसबाट सुन, चाँदी वा तामा मात्रै निकाल्नेछ । अरु फोहोर के गरिन्छ त्यसबारे कसैले केही बोलिरहेका पनि छैनन् । डिएगो आर्गेदस आरतिस /बीबीसी